Filohan’ny FJKM : “Azo sitranina tsara ny firenentsika” | NewsMada
Filohan’ny FJKM : “Azo sitranina tsara ny firenentsika”
“Azo sitranina tsara ny firenentsika. Andao hivavaka isika ho an’ny firenentsika.” Io ny antson’ny filohan’ny FJKM, ny pasitera Andriamahazosoa Irako Ammi, tamin’ny fitrotroana amim-bavaka azy sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2017 tamin’ny fanompoam-pivavahana teny amin’ny Colesium, Antsonjombe, omaly.
Mihantona ny orana ankehitriny. Efa tokony hiava vary ny olona, nefa na tsy mbola natao na ny ketsa aza. “Mahalala izany amin’ny endriny samihafa eto amin’ ny firenena isika “, hoy izy.
Notsiahiviny ny II Tan 7: 13-14: “Raha mampihantona ny andro Aho, ka tsy misy ranonorana latsaka (… ). Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny.”
Tsy afa-misaraka amin’ny vavaka ny fitiavana ny firenena. Ankoatra izany, hamboly hazo ny foibe FJKM. Misy ny trakitra amin’ny fitoriana ny Filazantsara hanatanterahana ny fanamby: “Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara“.
Antsony amin’ny fankalazana ny faha-50 taon’ny FJKM faha-200 taona nidiran’ny Filazantsara eto Madagasikara ny fananganana ny sekoly fanofanana mpitandrina eny Ivato. 6 700
ny fiangonana FJKM, nefa 1 250 ny mpitandrina. Mila ezaka fanamaroana ny mpitandrina.
“Tokony ho lohany miady amin’ny fahalovana isika kristianina”
“Mila miady amin’ny fahalovana samihafa eto amin’ ny firenena isika, ny kolikoly, herisetra, halatra, tsy fandriampahalemana… Tokony ho lohalaharana amin’izany ny kristianina“, hoy ny filoha Rajaonarimampianina, tamin’ny nandraisany ny Baiboly iray avy ho azy sy ny vadiny.
“Tokony hijoro isika, tsy ho menatra. Manana an’ Andriamanitra izay mijery antsika isika. Raha mandondona Izy: inty aho, iraho aho”, hoy izy. Efa manana ny fiadiana ho amin’izany izy: ny Baiboly. Nilaza hanampy amin’ny famontosana Filazantsara an’i Madagasikara izy.
Adidin’ny kristianina izany, raha izany no hanovana sy hampandrosoana ny firenena.
Manana firenena izay maro anisa ny kristianina ao aminy isika. Farafaratsiny, rehefa tsy afa-mitovitovy hevitra na miresaka politika, misy zavatra iray azon’ny kristianina ifampiresahana sy ifampitenenana: ny tenin’ Andriamanitra.
Mba hiova amin’izay ny fomba fitantanana sy ny toe-draharaham-pirenena? Andriamanitra no mahalala…